Imanyano enye yokurekhoda iiStudios ifumana isiqinisekiso seDolby Atmos | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » Imanyano enye yokurekhoda iiStudios ifumana isiqinisekiso seDolby Atmos
(l to r) UAndy Greenberg, injineli ephezulu kunye noyilo lweenkqubo, uManyano olunye; UDan Sperry, umlawuli weenkonzo zomxholo, iiDalby Laboratories; UJohn McGleenan, umongameli kunye nomnini, Umanyano olunye. Ifoto ngu-Elisa Gonzales.
Imanyano enye yokurekhoda iiStudios ifumana isiqinisekiso seDolby Atmos
IStudio 4 sidlula ngempumelelo kwinkqubo yokungqinisisa njengezicwangciso zenkampani yokongeza amandla e-Atmos kwamanye amagumbi okuxubha.
I-SAN FRANCISCO-I-Studios yinye yeRekhodi, umboneleli wokuqala weBay Area weenkonzo zasemva kwemveliso, ufumene isiqinisekiso IDolby Laboratories ukubonelela ngeenkonzo zokuxuba izandi kwiDolby Atmos yoKonwabisa iiKhaya. Isiqinisekiso sisebenza kwi-Studio ye-Union ye-Union enye kwaye kubandakanya a IDolby Laboratories udonga olubonisiweyo libonisa ukuba indawo iyangqinelana nobuchwephesha obuhambelana nefomathi yesandi sokuntywila.
"Studio 4 yenzelwe kwaye yakhiwa ukuze ihambelane nemilinganiselo yeDolby kule leta," watsho omnye umongameli weManyano kunye nomnini-ndawo uJohn McGleenan. "Abadlali beefilimu kunye nabavelisi ngoku banokukhetha ukudibanisa iiprojekthi zabo ngendlela ekumgangatho wecandelo elitsha lesandi sokuntywila. Ukuqinisekiswa kongeza elinye inqanaba lokuthuthuzela abathengi bethu. Banokuxubana apha eDolby Atmos besazi ukuba umsebenzi wenziwe ngokuchanekileyo. ”
(l to r) UAndy Greenberg, injineli ephezulu kunye noyilo lweenkqubo, uManyano olunye; UDan Sperry, umlawuli weenkonzo zomxholo, IDolby Laboratories; UJohn McGleenan, umongameli kunye nomnini, Umanyano olunye. Ifoto ngu-Elisa Gonzales.
Ukufezekisa ukuqinisekiswa, istudiyo seStudio 4 sasiphantsi kovavanyo olunamandla IDolby Laboratories iinjineli eziqinisekisile ijiyometri yegumbi, i-acoustics, ukuma kwesithethi kunye nokusebenza kwe-electroacoustic. Izixhobo zayo zokuxuba zibandakanya i Avid/ Inkqubo ye-Euphonix ye-5 yedijithali yedijithali yesandi, izixhobo ze-Pro 2019.6 kunye Avid I-MTRX (isebenzisa iziteshi ze-128 zeMADI kunye neDante kunye namakhadi e-analog). Iimpawu zobugcisa ezongezwe kwinkxaso ethile yeDolby Atmos zibandakanya isoftware yeDolby Atmos Mastering Suite kunye nekhompyuter yeDell RMU. Ukongeza kwi-Atmos, isitudiyo sinokuxuba kwi-9.1, 7.1, 5.1 kunye ne-stereo.
Inkqubo yesithethi yestudiyo ibandakanya i-Genelec Smart Active Monitors kunye ne-subwoofer ebekwe kwilungiselelo le-9.1.4 kwaye ilungelelaniswe nesoftware ye-Genelec Loudspeaker Management. Le nkqubo ibonelela ngokuphendula okucacileyo, okuchanekileyo nokungathathi hlangothi okuhambelana nexesha, inqanaba kunye nobuninzi, kwaye inokutshintshwa kwangoko ngenxa yeefomati ezahlukeneyo zezandi ezijikelezileyo. UMcGleenan uthi: "Eli gumbi lenziwe ngokugqibeleleyo. Uyakhunjulwa kwaye ungatshintshwa, ngokubekwa ngaphambili kwee-Atmos, 7.1 kunye ne5.1. "
Inkqubo ye-studio yokuqikelela ifana ngokuphezulu. Kubandakanya a Sony I-Ultra 4K projektha ye-laser, isikrini seprojekti ye-110-intshi kunye nomhloli we-Apple 4K.
Enye ye Studio Union ye-Union 5 njengangoku ikwinkqubo yokuqinisekiswa kweDolby Atmos.
Malunga neManyano enye yokuRekhoda iiStudios
Kubekwe entliziyweni yesithili seNtengiso yaseSan Francisco, i-One Union Record Record Studios yaqala kwi-1995 ngesitudiyo esinye. Namhlanje, inkampani inezikhundla eziphezulu zobuso ezi-5, zisebenza njengezixhobo eziphambili kwi-notch ephezulu kwiiarhente zentengiso yenkulumbuso yehlabathi, i-brands, umabonwakude kunye ne studio zeefilimu, abaphuhlisi bemidlalo kunye neenkampani zemveliso. Imanyano enye iyazincama ngokuzisa iiprojekthi. Sinikezela ngolwazi oluphezulu lobugcisa, ubugcisa kunye nobuchule, kunye nokuzinikela ekwakheni ubudlelwane.
Avid Dolby Atmos UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw SoftAtHome, MStar, iCES2017 Isandi Imikhonto kunye neentolo BuTeknoloji Injini yeVidiyo 2019-09-24
Previous: I-Qligent izisa umbono woQinisekiso lweMidiya kwi-Cable-Tec Expo 2019
next: Iikhamera zeMarshall POV Thatha iSports ukusasazwa kwinqanaba elilandelayo nge 'Player Cam'